Somali - customer service
Tani waa Folksam
Folksam mulkiilayaasheedu waa macmiilka. Tani micnaheedu waa in adigu aad tahay qofka mulkiile ka ah Folksam oo si wadajir ah ula leh macaamiishayada kale. Waxanu ammaan u abuurnaa dhammaan wixi aad daneyneyso – dhinaca dhammaan marxaladaha nolosha.
Maanta labadi iswiidhish ahba mid ayaa caymis kaga jira Folksam. Aragtidayada mustaqbalka waa in ay dadku dareemaan ammaan ah dhinaca adduun adag. Sidaas darteed waxanu leenahay shaqo deegaan oo fir-fircoon, cilmi-baadhis gaadiid gaar ah oo aad u qiimo badan iyo ku shaqayn adag dhinaca in rasamaalka lagu meeleeyo qaab mas’uuliyad dhammaystiran ah.
Kala doorasho weyn dhinaca caymisyada
Waxanu soo bandhignaa dhammaan noocyada ah caymisyada, tusaale ahaan dhinaca guri, carruur, baabuur, xayawaan, doon, daryeelka bukaan, nolol, dhacdo shil iyo weliba noocyo kala duwan oo badan dhinaca keydinta.
Waxa muhiim noo ah dhinacayaga Folksam in macaamiishayada oo dhan ay qayb u heli karaan waxanu soo bandhigno. Sidaas darteed waxaad la xidhiidhi kartaa Folksam adeegeeda macmiilka dalka oo dhan ee dhowrka luqadood ah. Luqadaada gaarka kuu ah ayaanu kugu siinaynaa soo bandhigid kugu haboon adiga iyo qoyskaaga. Waxanu u aragnaa inay muhiim tahay kala duwanaanshuhu. Sidaas darteed waxanu soo bandhignaa qaabab keydin oo kala duwan kuwaas oo ku haboon dadka oo dhan iyadoo aan loo eegayn aasaaska qolo ama ka tirsanaanta diin.
Waxanu kugu caawinaynaa 18 luqadood oo kala duwan
Folksam waa mid nooceedu gaar yahay, waxanu nahay shirkada caymis ee keliya dhinaca xirfaddan taasoo adeega caymis ku soo bandhigta 18 luqadood oo kala duwan. Luqad kastaa waxay leedahay lambar telafoon oo gaar ah iyo gacan-yarayaal gaar ahaaneed kuwaas oo aad wici karto 365 maalmood sanadki oo dhan, 24 saacadood maalinti iyo habeenkiiba.
Waxanu aad u sugaynaa inaad nala soo xidhiidhid oo na siisid fursada in la eego adiga iyo qoyskaagaba baahidiina ammaan ee guud. Ku soo dhawow inaad nagula soo xidhiidho luqadaada gaarka ah!
0771-58 59 11